Manamboninahitra maty nisy namono tao Tajikistan rehefa nahazo lohatenin-gazety indray ny fanerena hiditra ho miaramila [zazavao] · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Novambra 2015 7:22 GMT
Zazavao voaantso manatrika lalao tolona iray ao Tajikistan. sary avy amin'ny Eurasianet sy David Trilling, Nahazoana alalana.
Ny vono olona tamin'ny fiandohan'ny herinandro lasa teo nihatra tamin'ny manamboninahitra roa mpanangona zazavao tao an-drenivohitr'i Tajikistan ao Dushanbe dia nojinerin'ny mpiserasera aterineto ao an-toerana ho vokatry ny oblava — fakana ankeriny tanora amin'ny taona tokony hanaovany raharaha miaramila.
Tamin'ny 9 Novambra dia nisy gidragidra nitranga teo amin'ny mpanafika tsy fantatra sy ny manamboninahitra efatra ao amin'ny fanangonana zazavao tao Dushanbe. Noho ny antony tsy navoakan'ny manampahefana, dia notsatohan'ireo ahiahiana tamin'ny antsy ireo manamboninahitra sy ny mpamiliny ka niafara tamin'ny fahafatesan'olona roa.
Ny Global Voices dia efa nanoratra ny amin'ny tranga-javatra miseho amin'ny oblava tato, tato ary tato. Ho an'ny tanora zazalahy Tajik maro dia ny resaka fomba idifiana tsy hanaovana raharaha miaramila tsy maintsy atao no mivohitra indrindra ao aminy. Malaza ratsy ny fomba fandraisan'ny tafik'i Tajikistan ireo zazavao, amin'ny fampisedrana azy ireo isan'andro isan'andro eo ampelatanan'ny miaramila zokiny ara-taona.
Araka ny antotanisa notsongain'ny BBC tamin'ny 2013, dia farafahakeliny ny 40% amin'ireo zazavao voaantso tao Tajikistan no tonga tao amin'ny tafika tamin'ny alalan'ny fakana an-keriny.
Tsipahin'ny manampahefana Tajik fa ny fahafatesan'ireo manamboninahitra mpanangona zazavao dia avy amin'ny asam-pamaizana na fiarovan-tena nataon'ireo nokendrena hampidirina zazavao, tamin'ny filazana fa efa tapitra ara-potoana ary sambany hatramin'ny nahazoana ny fahaleovantena izany fanangonana zazavao izany tao Dushanbe.
Saingy vitsy no resy lahatra amin'izany fanazavana izany.
Voalohany, ny fanekena ho fifandraisana misy amin'ny oblava sy ny fahafatesana tantaraina etoana dia hametraka fa mampiasa ny fakana ankeriny ny rafitra ofisialy hanohanana ny tafika tsy ampy vola sy malaza ratsy.
Ankoatra izany, ny fahatahorana hanao fanompoana ao amin'ny tafika Tajik no fomba mahomby ihany koa hizakana ny mpiasa ho kely karama.
Rehefa voasambotry ny manamboninahitra mpanangona zazavao ny zatovolahy dia manome kolikoly eo an-toerana mba tsy horaisina ho ao amin'ny birao fandraisana zazavavo. Mety amin'ny rehetra izay ka dia mitohy ny fifanontsanan-tanana.
Ny iray amin'ny mpaneho hevitra ambanin'ny lahatsoratra ao amin'ny seha-gazety iray ao an-toerana Asia Plus te-hametraka fa tahaka izao ny tian'ireo manamboninahitra voatafika ireo:
1 ноября официально объявили о полном окончании осеннего призыва, а эти молодчики решили немного поправить свои финансовые положения. Увы, не на тех нарвались. Уверен, что наши комиссары и Минобороны немного задумаются о своем здоровье и подумают о своей жизни – стоит ли из-за нескольких сотен сомони нарываться на грубость и идти на нож.
Ny voalohany November no ambara ofisialy ho fiafaran'ny fandraisana zazavao amin'ny mihintsan-dravina, saingy nanapa-kevitra ny hampitombo ny toe-bolany ry zalahy ireto. Indrisy fa any amin'ny tsy izy ry zalahy no nisambotra. Matoky aho fa manomboka izao ireo voairaka ireo sy ny minisiteran'ny fiarovana dia hieritreritra ny fahasalamany sy ny ainy mialoha ny idirana amin'ny zavatra mampidi-doza tahaka izao noho ny vola somoni [vola ao an-toerana] anjatony fotsiny.
Raha manao sahisahy kosa ny mpamaky iray :
походу облава,поэтому подростки отх*ярили их и убежали,я думаю правильно сделали,ибо нех*й гонятся за поцанами и силой уводить в армию,а от туда отправлять их инвалидами или что хуже ешё убитыми
Tahaka ny oblava, izany no mahatonga ny tanora hidaroka azy ireo sy handositra. Mihevitra aho fa mety ny nataony satria tsy tokony hihaza zatovolahy ry zareo ary hanery azy ireo hanompo ao amin'ny tafika hahatonga azy ireo ho lasa sembana na hahafaty azy ireo ao mihitsy aza.
Tsy fanitarana io teboka farany io.
Tamin'ny herintaona ny manamboninahitra miaramila iray no nodidian'ny fitsarana Tajik iray higadra sivy taona noho ny fidarohana zazavao voaantso iray mandrapahafatiny azy. Raha karazana kihondalana hipetraka ho tantara, navantana hoan'ny sarambabembahoaka noho ny resaka herisetra mitranga ao amin'ny tafika, eo amin'ny resaka didim-pitsarana io fotoa-pitsarana iray io, dia milaza ny tatitra isankarazany fa mbola mieli-patrana hatrany ny daroka mamaivay ao.
Tahaka izao ihany koa ny nosoratan'ny mpamakin'ny Asia Plus iray hafa :
Я лично сожалею, что сотрудники комисариата пострадали и даже погибли! И кто это сделал тот должен ответить перед законом!
С другой стороны, это эхо той системы которая работает больше двадцати лет во время призывов в армию Таджикистана? И я надеюсь этот скорбный случай будет поводом для комисаров военкоматов отказаться от “облав” и “бизнеса”…
Izaho manokana malahelo noho ny ratra na hatramin'ny fahafatesan'ireo manamboninahitra mpanangona zazavao mihitsy aza! Tokony hotazonina ho tompon'andraikitra eo anoloan'ny lalàna izay nanao izao! Etsy ankilany, izao no akon'ny rafitra izay niasa nihoatra ny 20 taona nandritra ny fotoanan'ny fandraisana zazavao ao Tajikistan. Manantena aho fa izao tranga mampisaona izao dia ho antony hanakana ireo manampahefanan'ny mpanangona zazavao hanao ny “bizin'ny oblava.”
Hatramin'izao ny Minisiteran'ny Raharaha Anatiny dia nilaza fa vonona ny hanome 10.000 dolara amerikana ho valisoan'izay manana fampahafantarana momba ireo ahiahiana.